Puntland oo xilka ka qaaday xildhibaano - BBC News Somali
Puntland oo xilka ka qaaday xildhibaano
Barlamanka Puntland ayaa maanta xasaanadii ka qaaday saddex xubnood oo horay uga tirsanaa golaha barlamanka, kuwaas oo xeer ilaaliyaha guud ee dawladda uu ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ururka SSC oo maamulka Puntland u aqoonsan yahay mid aan sharci ahayn oo ka mamnuuc ah gudaha Puntland. Xildhibaannada xasaanadda laga qaaday ayaa arrintaas ku tilmaamay mid shirqool ah oo aan sharciga waafaqsanayn.
Saddexda xildhibaan ee laga qaaday xilka waxay ka soo wada jeedaan gobolka Sool, waxaana xasaanad ka qaadistoodu ku dhaqan gashay eedayn uga timid xafiiska xeer ilaalinta oo tilmaamaysa inay galeen khayaano qaran iyadoo markaa ka dibna la horgeeyay barlamanka.
Kulankii maanta ee barlamanka waxaa fadhiyay 52 mudane waxaana u codeedeeyay in saddexda xildhibaan laga qaado xasaanadda 26 mudane waxaana diiday 22 mudane iyadoo 4 mudane ay ka aamuseen sidaas ayuuna guddoonka barlamanku ku ansixiyay in saddexda mudane dibadda looga tuuro barlamanka.
Xeer- ilaaliyaha guud ee dawladda Maxamud Xasan Aw-Cusmaan oo u warramay BBCda ayaa faahfaahin ka bixiyay, dembiyada lagu eedeeyay saddexda mudane ee ay ku waayeen xilalkoodii iyo sida ay xil-ka-qaadistoodu u tahay mid sharciga waafaqsan.
‘‘ Arrintan waxay ka dambaysay markii dawladdu ay ogaatay in saddexda mudane ay ku lug leeyihiin ururka SSC oo ay wax ka hoggaamiyeen in Puntland la kala gooyo, waxaana la ogyahay in dastuurka Puntland uu caddaynayo xuduudaha iyo gobollada iyo degmooyinka ay Puntlnad ka kooban ahay saddexda mudane waxay si bareer ah ugu tunteen qodobbo ka tirsan dastuurka.’’
Saddexda mudane ee laga xayuubiyay xilalkii ay ka hayeen Baarlamanka Puntland waxay kala yihiin Cumar Jaamac Sulaymaan, Ibraahim Max’ud Guure iyo Abshir Cabdicasiis Sheekh oo golaha wakiillada ku soo biiray sannnadkii 2009 markii la dhisay Baarlamanka Puntland.
Inkasta oo saddexda mudane ay waayeen xilkoodii hadana waxay ula muuqataa in tallaabada xilka looga qaaday iyo dariiqa loo marayba ay tahay shirqool iyaga loo maleegay oo aan sharci ahayn.
Xiriirka la sheegay inay saddexda xubnood la leeyihiin ururka SSC waxaa Baarlamanka hortiisa ka caddeeyay xubno ka tirsan Baarlamanka, taas oo ay ku qanceen Baarlamaanka iyo xeer ilaalinta intaba waxana madaxda Puntland ay tilmaamayaan inaysan suuragal ahayn inuu xil u qabto maamulka qof ku shaqaynaya aragtida ururka SSC, ee tilmaamaysa in gobollada Sool iyo Cayn ee Buuhoodle ay ka go’aan maamulka Puntland.
Tan iyo intii la dhisay Baarlamanka hadda ka jira Puntland bishii Janaayo ee sanandkii 2009, waa markii ugu horraysay ee barlamanka laga eryo mudanayaal inta laga qaado xasaanadii ay lahaayeen waxayna tallaabadani muujinaysaa mowqifka maamulku ka taagan yahay ururka SSC.